Mampiasà fako fiompiana hamokarana zezika biolojika biolojika
Ny fitsaboana sahaza sy ny fampiasana mahomby ny zezika amin'ny biby fiompy dia mety hitondra fidiram-bola be ho an'ny ankamaroan'ny tantsaha, fa koa hanatsara ny fanavaozana ny indostrian'izy ireo manokana.
Zezika biolojika biolojika dia karazana zezika iray misy fiasan'ny zezika mikraoba sy zezika biolojika, izay azo avy amin'ny sisa tavela amin'ny biby sy zavamaniry (toy ny zezika biby fiompy, mololo, sns.) ary entina amin'ny fitsaboana tsy mampidi-doza.
Io dia mamaritra fa ny zezika biolojika biolojika dia manana singa roa: (1) fiasa manokana an'ny zavamiaina bitika. (2) fako biolojika voatsabo.
(1) Mikraoba bitika manokana
Ny zavamiaina bitika miasa manokana amin'ny zezika biolojika biolojika dia matetika manondro ireo zavamiaina bitika, ao anatin'izany ny karazana bakteria, holatra ary actinomycetes isan-karazany, izay afaka mampiroborobo ny fiovan'ny otrikaina amin'ny tany sy ny fitomboan'ny vokatra aorian'ny fampiharana ny tany. Ny lahasa manokana dia azo sokajiana toy izao:
1. bakteria manamboatra nitroka: (1) bakteria manamboatra azota-bitika: indrindra ilazana ny rhizobia mamokatra leguminous toy ny: rhizobia, rhizobia manamboatra azotaona, zana-kazo rhizobia manamboatra amoniaka, sns.; Ny bakteria manamboatra nitrôgôniôma tsy misy leguminous toy ny Franklinella, Cyanobacteria, avo kokoa ny fahombiazan'ny fitrandrahana azotazy. ② bakteria manamboatra azota manototra: toy ny bakteria manamboatra azota boribory, bakteria fotosintetika, sns. (3) bakteria manamboatra azotazy mitambatra: manondro ireo zavamiaina bitika izay mety ho irery rehefa miaina ao anaty faka sy ravina ravina ravina , toy ny Pseudomonas genus, lipogenic nitrogen-fixing helicobacteria, sns.
2.Fosforosika mamoaka holatra (manalefaka) holatra: Bacillus (toy ny Bacillus megacephalus, Bacillus cereus, Bacillus humilus, sns.), Pseudomonas (toy ny fluorescens Pseudomonas), bakteria miorina amin'ny Nitrogen, Rhizobium, Thiobacillus thiooxidans, Penicillium, Aspergill , Streptomyces, sns.
3. Bakteria potasioma (levona): bakteria silicate (toy ny colloid Bacillus, colloid Bacillus, cyclosporillus), bakteria potassium tsy misy silicate.
4. Antibiotika: Trichoderma (toy ny Trichoderma harzianum), actinomycetes (toy ny Streptomyces flatus, Streptomyces sp. Sp.), Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis varieties, sns.
5. bakteria mampiroborobo ny tontolon'ny tontolon'ny velaran-tany sy ny holatra mampiroborobo ny zavamaniry.
6. bakteria amin'ny sehatra maivana: karazana maro amin'ny karazana Pseudomonas gracilis ary karazana maromaro amin'ny karazana Pseudomonas gracilis. Ireo karazana ireo dia bakteria aerobika mahay manavaka izay afaka maniry eo amin'ny fisian'ny hidrôzenina ary mety amin'ny famokarana zezika biolojika biolojika.
7. Bakteria famokarana mahatohitra sy mitombo: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Phylloidase, Cordyceps ary Bacillus.
8. bakteria mamaivay ny cellulose: spora thermophilic lateral, Trichoderma, Mucor, sns.
9. Ireo zavamiaina bitika hafa miasa: aorian'ny fidiran'ny zavamiaina bitika amin'ny tany, dia afaka mamoaka akora mihetsika ara-batana izy ireo handrisihana sy hifehezana ny fitomboan'ny zavamaniry. Ny sasany amin'izy ireo dia misy vokany fanadiovana sy famotehana amin'ny poizina amin'ny tany, toy ny bakteria masirasira sy asidra laktika.
2) Fitaovana voajanahary azo avy amin'ny residu biby efa lo. Ireo fitaovana biolojika tsy misy fermentation, tsy azo ampiasaina mivantana hanaovana zezika, ary tsy afaka miditra amin'ny tsena.
Mba hahafahan'ny bakteria mifandray tanteraka amin'ny akora ary hahatratra ny masirasira tsara dia azo ahetsika mitovy amin'ny compmilina turner toy ny etsy ambany:
Fitaovana biolojika ampiasaina matetika
(1) Soa: akoho, kisoa, omby, ondry, soavaly ary zezika biby hafa.
(2) Vary: mololo katsaka, mololo, mololo varimbazaha, mololo soja ary tahon-javamaniry hafa.
(3) husk sy bran. Vovoka sakam-bary, vovo-boanjo voanjo, vovo-ketsa voanjo, vovo-bary, holatra sns.
(4) zana-ketsa: tavy fanala, totozy soja, vinaingitra vinaingitra, fôtony volom-borona, fatran'ny xylose, fatran'ny anzima, tavy tongolo lay, siramamy siramamy, sns.
(5) sakafo mofomamy. Mofomamy soja, sakafo soja, menaka, mofomamy, sns.
(6) Ny fotaka ao an-trano hafa, fotaka fanadiovan-tsolika, fotaka siramamy, bagasse, sns.
Ireo akora ireo dia azo ampiasaina ho akora ilaina otrikaina mpanampy ho an'ny ny famokarana zezika biolojika biolojika aorian'ny fanamasinana.
Miaraka amin'ny zavamiaina bitika manokana sy ireo fitaovana biolojika lo. Ireo fepetra roa ireo dia azo atao amin'ny zezika biolojika biolojika.
1) Fomba fampidirana mivantana
1, safidio bakteria mikraoba manokana: azo ampiasaina ho karazany iray na roa, farafaharatsiny tsy mihoatra ny karazany telo, satria ny bakteria maro safidy, mifaninana amin'ny otrikaina misy eo amin'izy samy izy, dia mitarika mivantana ny fiasan'ny offset.
2. Kajy ny habetsaky ny fanampiana: araka ny fenitra NY884-2012 amin'ny zezika biolojika ao Shina, ny isan'ireo bakteria velona biolojika voajanahary dia tokony hahatratra 0,2 tapitrisa / g. Ao anatin'ny akora biolojika iray taonina, tokony homena zavamiaina bitika mihoatra ny 2 kg misy bakteria velona ≥10 miliara / g. Raha 1 miliara / g ny isan'ireo bakteria velona mihetsika dia mihoatra ny 20 kg no mila ampiana, sns. Ny firenena samy hafa dia tokony hampiditra anton-draharaha samihafa.
3. Fomba fampidirana: Ampio ny bakteria (vovoka) miasa amin'ny fitaovana voajanahary voaangona araka ny fomba voalaza ao amin'ny boky fampianarana, afangaroy ary aforeto.
4. Fitandremana: (1) Aza maina amin'ny hafanana avo mihoatra ny 100 ℃, raha tsy izany dia hahafaty ny bakteria miasa. Raha ilaina ny maina dia tokony ampiana aorian'ny fanamainana. (2) Noho ny antony maro samihafa, ny atin'ny bakteria amin'ny zezika biolojika biolojika nomanin'ny fomba fikajiana mahazatra dia matetika tsy miankina amin'ny angon-drakitra idealy, noho izany amin'ny fizotran'ny fanomanana, ny zavamiaina bitika miasa matetika dia mihoatra ny 10% avo kokoa noho ny angona idealy. .
2) fomba kolontsaina fahanterana sy fanitarana faharoa
Raha ampitahaina amin'ny fomba fampidirana mivantana, io fomba io dia manana tombony amin'ny fitehirizana ny vidin'ny bakteria. Ny lafy ratsy dia ilaina ny fanandramana hamaritana ny habetsaky ny mikraoba manokana ampiana, sady manampy dingana hafa kely kokoa. Amporisihina amin'ny ankapobeny fa ny vola ampiana 20% na avo noho ny fomba fampidirana mivantana ary hahatratra ny fenitra zezika biolojika nasionaly amin'ny alàlan'ny fomba fahanterana faharoa. Ireto ny dingana fandidiana:
1. Misafidiana bakteria mikraoba (vovoka) manokana: mety ho karazany iray na roa, farafaharatsiny tsy mihoatra ny karazany telo, satria ny bakteria betsaka no mifidy, mifaninana amin'ny otrikaina eo anelanelany, mitarika mivantana ny vokatry ny fihenan'ny bakteria samihafa.
2. Kajy ny habetsaky ny fanampiana: araka ny fenitry ny zezika biolojika ao Shina, ny isan'ireo bakteria velona misy zezika biolojika dia tokony hahatratra 0,2 tapitrisa / g. Amin'ny taonina iray amin'ny fitaovana biolojika, ny bakteria velona mahomby ≥10 miliara / g an'ny mikraoba (vovoka) miasa manokana dia tokony ampiana farafaharatsiny 0,4 kg. Raha ny isan'ny bakteria velona miasa dia 1 miliara / g, mihoatra ny 4 kg no mila ampiana, sns. Ny firenena samy hafa dia tokony hanaraka fenitra samihafa hanampiana fanampiny.
3. Fomba fampidirana: ny bakteria (vovoka) miasa ary ny lohan'ny varimbazaha, vovo-dronono, bran na iray hafa amin'izy ireo amin'ny fampifangaroana, ampio mivantana ireo akora biolojika namboarina, mifangaro milanja, namboarina nandritra ny 3-5 andro hanaovana ilay voafaritra fihanaky ny bakteria miasa.
4. Fanaraha-maso ny hamandoana sy ny mari-pana: mandritra ny fanamoriana miangona, ny hamandoana sy ny mari-pana dia tokony hofehezina arakaraka ny toetra biolojika an'ny bakteria miasa. Raha avo loatra ny mari-pana dia tokony hahena ny haavon'ny stacking.
5. Famaritana votoatin'ny bakteria miasa manokana: aorian'ny faran'ny fametrahana, fakana santionany ary alefaso amin'ny andrim-panjakana manana fahaiza-mamantatra mikraoba hamantatra mialoha raha mety mahafeno ny fenitra ny atin'ny zavamiaina bitika manokana, raha azo tratrarina dia azonao atao ny manamboatra zezika biolojika biolojika tamin'ity fomba ity. Raha tsy tratra izany dia ampitomboy ny habetsahan'ny bakteria miasa manokana ho 40% amin'ny fomba fampidirana mivantana ary avereno mandra-pahombiazana.
6. Fitandremana: Aza maina amin'ny hafanana avo mihoatra ny 100 ℃, raha tsy izany dia hahafaty ny bakteria miasa. Raha ilaina ny maina dia tokony ampiana aorian'ny fanamainana.
Ao amin'ny famokarana zezika biolojika aorian'ny fanamasinana dia mazàna vovoka izy io, izay matetika manidina miaraka amin'ny rivotra amin'ny main-tany, ka mahatonga ny fahaverezan'ny akora sy ny loto. Noho izany, mba hampihenana ny vovoka sy hisorohana ny fanaovana moka,dingana granulation matetika ampiasaina. Afaka mampiasa ianao ny granulator nify mampihetsi-po amin'ny sary etsy ambony ho an'ny granulation, dia azo ampiharina amin'ny asidra humic, black carbon, kaolin ary ireo akora hafa sarotra zahana.